Tapak-dia azo antoka, Seal momba ny fizahan-tany azo antoka ve sa izy roa?
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Tapak-dia azo antoka, Seal momba ny fizahan-tany azo antoka ve sa izy roa?
"Ny tombo-kase azo antoka an'ny Travels nataon'ny WTTC sy ny Seal fizahan-tany azo antoka kokoa amin'ny alàlan'ny fanamboarana indray dia tsy misy fifaninanana," hoy i Alain St. Ange, kandidà ho filohan'ny Seychelles, izay minisitry ny fizahantany teo aloha, ary filohan'ny Birao fizahan-tany afrikanina.
Ny fiarovana ny dia dia miankina amin'ny roa, ny mpamatsy ary ny mpandray, ary mila fitarihana izany. Fantatra io zava-misy io, Rebuilding Travel dia namorona ny
Ny mari-pankasitrahana fizahan-tany azo antoka
Làlana fizahan-tany azo antoka
Birao fizahantany afrikaninany talen'ny komitin'ny fiarovana sy fiarovana, Dr. Walter Mzembi, dia naneho hevitra taorian'ny latabatry ny minisitra omaly fa manana firenena 55, toerana 55, marika 55 i Afrika ary mbola olana izany. Raha tsy mahavita ny sasany amin'ireo marika dia miantoka andraikitra amin'ny ambiny izy ireo ary misintona ny ezaky ny hafa.
Nanohy i Mzembi: "Ny toerana tokony honenana izao dia tokony hanamarina ny diany fanarenana amin'ny alalàn'ny fankatoavana avy amin'ireo mpandray anjara malaza, ao anatin'izany fananganana.travel Tombo-kase fizahan-tany azo antoka sy WTTC ary ny azy Tapak-dia azo antoka. Hampitombo ny fahatokisan'ny tsena ny tsena loharano izany.
Kenya dia nitazona ohatra tamin'ny alàlan'ny fananganana ny tombo-kase sy ny hajia. Ny tena izy dia - misy ifandraisany be ny tsena loharanom-pahalalana ary tsy misy fanekena tokana mety hanomezana fahafaham-po ny ahiahy amin'ny tsena sy ny fanontaniana momba an'i Afrika, vao mainka mihombo hatrany raha toa ka ny tsy fivadihan'ny vokatra no anton'izany, satria miresaka fiainana eto isika.
Izany rehetra izany dia tsy marina ho an'i Afrika ihany. Nigel David., Talem-paritra ary WTTC Ny masoivoho, dia nilaza tamin'ny latabatra boriborintany nataon'ny minisitra nokarakarain'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany (ATB) omaly, fa efa nomena toerana 90 mahery ny hajia. Fanarenana indray. Fitsidihana ilay namoaka ny Seal fizahan-tany Safer dia manana mpikambana ao amin'ny firenena 117. Raha ny tena izy dia samy mifameno ireo rafitra roa ireo ary tokony hahasarika ny mpizahatany rehetra na aiza na aiza.
Tapakem-piarovana azo antoka WTTC
WTTC dia milaza momba ny Safe Travels Stamp: "WTTC miaraka amin'ireo Mpikambana, governemanta, manam-pahaizana momba ny fahasalamana, ary ireo fikambanan'ny indostria hafa dia miara-miasa mba hahatratrarana ireo protokolà fanarenana mahomby amin'ny alàlan'ny famolavolana drafi-pandaminana misy dikany izay manatsara ny ezaka fanarenana amin'ny sehatra rehetra.
"Ampahany amin'ny protokolatsika dia misy ny fanomezana ireo sehatra ho an'ny daholobe sy tsy miankina fahitana sy fitaovana ho an'ny fifandraisana sy ny fampiharana mba hiantohana ny olona milamina sy mahatsiaro ho voaro, na eo aza izany, ny WTTC, ireo mpikambana ao aminay sy ilay sehatra dia tsy afaka miantoka fiarovana 100%. Zava-dehibe indrindra ny fananana fitsipika iraisana. Farany, mahita ny hoavin'ny dia izahay izay azo antoka, azo antoka, tsy misy tohika, ary manome traikefa marina sy misy dikany ho an'ny mpandeha amin'ny dia rehetra; iray izay manohana ny fiveloman'ny olona an-tapitrisany maro ary manampy amin'ny fitomboana ara-toekarena maharitra. ”
“Ny Stamp WTTC Safe Travels Stamp dia fandraisana andraikitra tena tsara avy amin'ny fikambanana mpikambanan'ny dia. Na dia mety hiteraka andraikitra aza ny teny hoe fitsangantsanganana azo antoka », hoy ny talen'ny CEO WTTC, Gloria Guevara eTurboNews, "Ny Stamp dia tsy fanamarinana velively, fa fampanantenan-tena mifototra amin'ny fandinihan-tena momba ny kaonty efa voadinika tsara. Ny WTTC dia nametraka ireo kavina toy izany ho an'ny faritra maro amin'ny indostria. Amin'ny fianianana amin'ny WTTC hanaraka ny fomba fanao toy izany dia mahazo mampiseho ny Stamp ny mpandray. ”
"Izahay amin'ny fanarenana.travel dia nanampy safidy marobe ho an'ny Seal fizahan-tany azo antoka", hoy i Juergen Steinmetz, mpikambana mpanorina ny fanarenana.travel. Steinmetz koa dia CEO an'ny Travel News Group, tompon'ny eTurboNews, ary mpikambana iray ao amin'ny Komity Mpanatanteraka ao amin'ny Birao Fizahan-tany any Afrika.
Hoy i Steinmetz: “Mitovy amin'ny tombo-kase WTTC, ny tombo-kasenay dia mifototra amin'ny fandinihan-tena fa tsy fanamarinana. Mitovy amin'ny WTTC, ny tombo-kasenay dia maimaimpoana. Izay mankato ny torolàlana nankatoavina, ao anatin'izany ny fampanantenan'ny WTTC, ny fandraisana andraikitra TUV any Alemana, ny fandraisana an-tanana nataon'i Seychelles, Torkia, Espana, na Jamaika ohatra, dia ekena ho an'ny Seal Tourism Seal. Mazava ho azy fa ny manaraka ny torolàlana nomen'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia anton-javatra iray mahafeno fepetra. ”
“Tsy mifaninana amin'ny WTTC izahay, fa mameno ny WTTC sy ny fandraisana andraikitra hafa. Miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny firenena 117 mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra izay nanamora ny fanarenana. Hetsika rehetra izay azon'ny rehetra ianarana avy amin'ny olon-kafa rehetra. Fifandraisana izay efa nampidirina WTTC. ”
“Tsy voatery ho mpikambana amin'ny fikambanana ianao vao handray anjara. Raisinay an-tanan-droa ny mpitondra rehetra sy ireo izay mifandraika amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. ”
Ireto ny sasany amin'ireo safidy fanampiny miaraka amin'ny Seal.
Ny Seal fizahan-tany Safer dia manome fanombanana an-tsitrapo ataon'ny manam-pahaizana. Ity fanombanana ity dia natao aorian'ny resadresaka nifanaovana sy dinika 50 isa.
Ity dia ampahany amin'ny tombana nosoratan'i Dr. Peter Tarlow avy amin'ny Safer Tourism ho valin'ny fangatahana ny tombo-kase nataon'ny Ministeran'ny fizahan-tany Kenya:
Ny Hon. Nahazo izany loka izany i Najib Balala tamin'ny fivoriana manokana tao amin'ny livestream.travel navoaka manerantany.
Ny Minisiteran'ny fizahantany Kenyana amin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Rebuilding fizahan-tany dia naneho fa takany fa ny fiantohana fizahan-tany dia misy fiofanana, fampianarana, fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko, ary ny fahatakarana fa ny filaminana / antoka azo antoka dia tsy fifehezana tsotra. Nandritra ny vanim-potoana fiovana lehibe sy fanamby miainga amin'ny olan'ny fahasalamana ka hatramin'ny filaminana dia naneho ny minisiteran'ny fizahantany Kenyana fa manaiky ny zava-misy fa ny mpiasan'ny fizahan-tany dia hanana fiofanana tsy miova ary tokony hahay handanjalanja mba hanitsiana ny fomba fanaony amin'ny tontolo miovaova hatrany.
Nasehon'ny minisitera fa nandray anjara tamin'ny famoronana vokatra fizahan-tany azo antoka izy ary mampiseho amin'ny mpitsidika fa manao ny fomba rehetra ny firenena mba hamoronana tontolo azo antoka sy azo antoka ary salama amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo masoivoho iraisam-pirenena, amin'ny fandraisana anjara amin'ireo masoivohom-paritra toa izany. amin'ny maha-Birao fizahantany afrikanina azy ary amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny fiarovana ny fizahantany sy ny manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamana
HE Najib Balala, Minisitry ny fizahantany Kenya, Doris Woerfel CEO, Cuthbert Ncube Chair Afrikana fizahan-tany Afrikanina (nalaina tamin'ny Nov 2019 tao WTM London)
Ny minisiteran'ny fizahantany any Kenya dia nanondro fa mandray fepetra mihetsika izy mba hanomezana toky an'ireo mpitsidika ny traikefa azo antoka indrindra amin'ny fizahan-tany. Fantatry ny minisitera tsara fa tsy misy afaka manome toky ny fiarovana sy filaminana 100% ary tsy hisy olona harary. Ny azony atao dia ny manome ny fepetra azo antoka indrindra momba ny fizahantany. Noho io antony io dia nitatitra ny governemanta fa:
Izy io dia namorona sy manavao azy ireo ny fombafomba ara-pahasalamana sy azo antoka amin'ny fotoana sy isam-paritra
Izy io dia nampihatra ny masonkarena azo antoka momba ny fahasalamana, ny fanadiovana, ny famonoana otrikaretina, ny fanalavirana ary ny fiarovana izay azo vidiana sy mavitrika
Manaraka ny torolàlana momba ny halavirana sosialy iraisampirenena na ho an'ny mpiasa na ho an'ny mpitsidika ary hiasa hamorona vahaolana tsy misy tohiny raha azo atao. Ny politika Te touchless dia midika koa fa isaky ny azo atao ny teknolojia ampiasaina hampihenana ny fifandraisana ara-batana amin'ny hotely, trano fisakafoanana, toerana fitaterana sns.
Ny minisiteran'ny fizahantany dia mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fanomezana PPE (fitaovam-piarovana manokana) manerana ny sehatry ny fizahantany. Ity fampidirana ity dia ho an'ny mpiasa sy ny mpiasa ary ho an'ny vahiny koa rehefa angatahina. Ny fitaovana PPE dia atolotra maimaim-poana
Ny Minisiteran'ny fizahantany any Kenya dia mamporisika ny fanaovana sarontava rehefa ny fifandraisana manokana dia midika fa ao anatin'ny toe-javatra misy olona izay latsaky ny 2 metatra ny elanelany. Ny sarontava dia ampiasaina amin'ny fitateram-bahoaka sy ny toerana anatiny
Ny Minisitera dia mangataka ny fanasana tanana matetika sy ny fanadiovana ny efitranon'ny trano fandraisam-bahiny sy toerana hafa na fitaovana ampiasain'ny besinimaro.
Ny governemanta any Kenya dia miasa mba hanomezana mpanadio tànana mifanaraka amin'ny filan'ny besinimaro sy ny indostrian'ny fizahantany
Mamporisika ny toerana fizahan-tany rehetra sy ny orinasa ny minisitera hametraka sakana fisarahana ara-batana toy ny fampiasana plexiglass ary miaraka amin'izay koa mba hahatsapa ny filan'ny ekolojika sy ny toetr'andro.
Ny governemanta Kenya amin'ny alàlan'ny minisiteran'ny fizahantany dia mijery manokana ireo tobin'ny fitaterana toy ny terminal terminal ary manantitrantitra ireo ivon-toerana fitaterana iraisam-pirenena sy orinasa toy ny zotram-piaramanidina mba hanaraka ny “Takeoff: Tari-dalana momba ny fitsangantsanganana an'habakabaka amin'ny alàlan'ny COVID-19 Krizy ara-pahasalamam-bahoaka ”
Ny minisiteran'ny fizahan-tany any Kenya dia mahatakatra fa rehefa miseho ny toe-javatra na ny fiovana izay mety tsy maintsy ovaina ihany koa ny politikany mba hiarovana ny mpitsidika amin'ny faran'izay betsaka indrindra.
Mba hahafahana mifehy ny areti-mandringana COVID-19 dia nanambara ny governemanta tamin'ny 12 aogositra 2020, hoy ny masoivohon'i Etazonia any Kenya fa misy protokolostika fanampiny napetraka:
Tapitra ny 7 jolay ny fampitsaharana ny baikon'ny hetsika izay mandrara ny fidirana sy ny fivoahana ny kaominin'i Nairobi, Mombasa, ary Mandera.
· Tamin'ny 6 Jolay, nanambara ny GoK fa hitarina mandritra ny 30 andro fanampiny ny fandrarana ny fivoriambe ara-tsosialy sy ara-politika.
Mihidy ny bara mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny. Tsy misy fivarotana zava-pisotro misy alikaola sy zava-pisotro misy fisakafoanana sy trano fisakafoanana manerana an'i Kenya manomboka ny 28 Jolay. Ny fotoana famaranana ny trano fisakafoanana sy ny fisakafoanana dia novaina tamin'ny 8 ora alina ka hatramin'ny 7 hariva hatramin'ny 28 Jolay, mandritra ny 30 andro manaraka.
Ny toeram-pivavahana dia mety hanomboka ny fisokafan'ny dingana mifanaraka amin'ny torolàlana azo ampiharina izay napetraky ny Inter-Faith Council. Araka ny voalaza tamin'ny 6 Jolay, ny torolàlana dia manome alalana mpandray anjara zato (100) farafahakeliny avela isaky ny lanonana fivavahana ary tsy tokony ho mihoatra ny adiny iray ny faharetany. Ny fanompoana ataon'ny olona dia tsy tokony hahitana mpiangona latsaky ny telo ambin'ny folo taona (13) taona na mihoatra ny valo amby dimampolo (58) na olona manana aretina. Ny sekoly alahady sy ny madrassas dia hijanona mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
Tamin'ny 16 Mey, ny fameperana ny hetsika dia napetraka tao amin'ny sy ivelan'i Kenya amin'ny alàlan'ny sisintany iraisampirenena Kenyan-Tanzania sy Kenyan-Somali, miaraka amin'ireo fiaran'ny entana.
Ireto fitsipika 10 voalaza etsy ambony ireto dia tokony hanampy amin'ny: Manome toky fa manaraka ny torolàlana momba ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny fahasalamana ny firenena ary miantoka fiantohana azo antoka ho an'ireo mpitsidika / vahiny sy mpanome tolotra. Amin'ny fanaovana ireo voalaza etsy ambony ireo ny minisiteran'ny fizahantany any Kenya dia hikatsaka ny hamerina ny fahatokisan'ny firenena, isam-paritra ary iraisam-pirenena ny traikefa azo antoka indrindra amin'ny fizahan-tany.
Misy sarany $ 250- $ 1000 amin'ny fanombanana toy izany.
Ny valin'ny fizahantany Safer dia azo alaina ho an'ny olona manokana ekena amin'ny fahamendrehany amin'ny ady atao amin'ny COVID-19. Ireo manana loka dia nampiseho fahaiza-mitarika, fanavaozana ary hetsika miavaka. Mandeha amin'ny dingana fanampiny izy ireo. Maimaimpoana ny fanolorana anarana sy ny loka.
Ny Passer fizahan-tany Safer natao manokana dia natokana ho an'ny mpandeha
Ny Passer fizahan-tany Safer natao manokana dia natokana ho an'ny mpandeha hiaraka amin'ny Safo Fizahan-tany Safer ho an'ny toeran-diany.
Ireo manana ny Passer momba ny fizahantany azo antoka kokoa dia nivoady fa ho mpandeha tompon'andraikitra ary hanaja ny torolàlana momba ny fahasalamana eo an-toerana izay napetraky ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana sy ny sampan-draharaham-pirenena momba ny fahasalamana. Ny STP dia midika fa tompon'andraikitra ny mpandeha ary mivoady ny hiaro tsy azy irery fa amin'ny mpiara-dia aminy rehetra koa. Ny mpihazona STP dia maneho ny tsara indrindra amin'ny dia ary mampiseho amin'izao tontolo izao fa ny fitsangatsanganana azo antoka dia andraikitry ny tsirairay. Misy sarany mitentina $ 5.00.
Amin'izao fotoana izao, ny Safer Tourism Seal dia miasa amin'ny famitana ny toerana vaovao amina am-polony maro ny mpandray anjara, mba hahafahan'izy ireo mampiseho ny Seal Tourism Seal.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny tombo-kase: www.fioritourismseal.com
Misokatra ny orinasam-pizahantany tsy ara-dalàna ao Sri Lanka
Hawaii Travel Ankehitriny dia mitaky fisoratana anarana amin'ny Quarantine nomerika mandatory